Akukho Ihotele iqhelekileyo: ISt. Regis ibonelela ngesisombululo esitsha kwingxaki yezentlalo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Akukho Ihotele iqhelekileyo: ISt. Regis ibonelela ngesisombululo esitsha kwingxaki yezentlalo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Cinezela iZaziso • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ngo-1904, uColonel John Jacob Astor waqhekeza umhlaba ukuze kwakhiwe ihotele iSt Regis kwikona yeFifth Avenue kunye ne-55th Street kwelona candelo laseNew York.
Abayili bezakhiwo yayiyiTrowbridge kunye neLivingston ezazizinze eNew York.
Amaqabane enkampani yayinguSamuel Beck Parkman Trowbridge (1862-1925) kunye noGoodhue Livingston (1867-1951).
UTrowbridge wafunda kwiKholeji yaseTrinity eHartford, eConnecticut. Ukuthweswa kwakhe isidanga ngo-1883, waya e-Columbia University kwaye kamva wafunda phesheya e-American School of Classical Study e-Athene nase-Ecole des Beaux-Arts eParis.
Ukubuyela kwakhe eNew York, wasebenzela umakhi uGeorge B. Post. UGoodhue Livingston, ophuma kusapho olwahlukileyo eNew York yobukoloniyali, ufumene isidanga sakhe kunye nesidanga sokuqala kwiDyunivesithi yaseColumbia. Ngo-1894, iTrowbridge, i-Livingston kunye ne-Stockton B. Colt yenza ubambiswano olwaqhubeka de kwangowe-1897 xa uColt wemkayo. Ifemu iyile izakhiwo zikawonke-wonke kunye nezorhwebo kwiSixeko saseNew York. Ngaphandle kweSt. Regis Hotel, ezona zazidumile yayiyivenkile yesebe iB.Altman (1905) e-34th Street nakwiFifth Avenue, Bankers Trust Company Building (1912) e-14 Wall Street nase-JP Morgan Building (1913) phesheya isitalato.
Ngo-1905, iSt. Regis yayiyeyona hotele inde eNew York, imi kumabali ali-19 aphezulu. Ixabiso legumbi laliyi- $ 5.00 ngosuku. Ukuvulwa kwehotele, abezindaba bachaza iSt. Regis “njengeyona hotele inezinto ezintle ehlabathini.”
Ulwakhiwo lwadla ngaphezulu kwe- $ 5.5 yezigidi zeedola, isixa esingavakaliyo ngelo xesha. U-Astor akazange asindise ndleko kwimpahla yexabiso: imigangatho emarmore emfutshane kunye neendlela zokuhamba ukusuka kwiikwari zaseCaen, ifanitshala yaseLouis XV evela eFrance, iicandle zekristale yaseWaterford, iitapestries zangaphambili kunye neerali zempuma. Wayefake iingcango ezimbini zokungena ngobhedu ezihonjisiweyo, iipaneli ezinqabileyo zokhuni, iindawo ezinkulu zomlilo zemabhile, iisilingi zokuhombisa kunye nomnxeba kwigumbi ngalinye, nto leyo eyayingaqhelekanga ngelo xesha.
Xa kuvulwa ihotele iSt. Regis ngo-1905, uMphathi Jikelele uRudolf M. Haan wakhupha incwadi enamaphepha angama-48 enesiciko esinamaphepha angama-44 nemifanekiso ebalaseleyo:
Ihotele iSt. Regis
“Ngokubhalwa kwehotele i-St. Regis kubalulekile ukuba sikhumbule ukuba asijonganga nohlobo lwehotele eqhelekileyo, kodwa sisisombululo sengxaki yentlalo esinyanzelwe yimeko yanamhlanje. Ixesha apho ihotele yayithetha indawo yokuhlala kumhambi; kwezi ntsuku, nangona kunjalo, kufuneka ithathele ingqalelo nabantu abanamakhaya amahle, abahlala bekufumanisa kufanelekile ukuvala izindlu zabo iveki okanye iinyanga ezimbalwa; abantu abanombono wokuhambisa ngeentuthuzelo zasekhaya, inkonzo elungileyo kunye nokutya, kunye nomoya wokungcamla nokucokiswa okokhe kwaba yinto enzima. Ukujongana ngqo nolu didi lwamaMelika ngendlela efanelekileyo, ngaphandle kokutyeshela undwendwe lobusuku obunye okanye iveki, nokuba yeyona ndawo iphambili yokutya, yayiyimbono kaMnu Haan, umongameli kunye nomoya okhokelayo wenkampani. Ngokuvunywa kwayo ngu-Col.John Jacob Astor kunye nentsebenziswano yobungcali yoyilo, iMessers. I-Trowbridge ne-Livingston, iSt. Regis kwisitalato samashumi amahlanu anesihlanu kunye neFifth Avenue ime njengesikhumbuzo…
ISt. Regis igubungela isiqwenga seenyawo ezingama-20,000 XNUMX, kwaye ngoku yeyona hotele inde eNew York. Indawo yayo ikhethwe kakuhle, kuba, ngelixa ibekwe entliziyweni yelona candelo lokuhlala laseNew York, kwindlela ehamba kakuhle yedolophu kwaye ngaphakathi kweebhloko ezine zeCentral Park, ifikeleleka ngokulula kuzo zonke iindlela, kwaye uninzi lweyona ndawo ivenkile , kunye neendawo zokuzonwabisa, zikumgama wokuhamba ngokulula. Kulungiselelwe abo bakhetha ukuqhuba, inkonzo elungeleyo yenqwelomoya ilungile ubusuku nemini…
Kwisebe lezococeko nokhuseleko zezona zinto zimbini, ezithi zisebenze eSt Regis okokuqala ngqa ngokupheleleyo- ulungiselelo lomoya ococekileyo kunye nokuthuthwa kothuli nenkunkuma. Kukho efakiweyo inkqubo yokungena komoya okunyanzelekileyo kudityaniswe nemitha engathanga ngqo enika kwisakhiwo sonke ubonelelo lomoya ococekileyo, ococekileyo, ofudumeleyo okanye opholileyo njengoko imozulu inokufuna… ..
Kuwo onke amagumbi anemigangatho emine okanye emihlanu kubonelelwe apho kungena umoya ongaphandle, ucocwe ngefilitha zelaphu zeshizi, ukufudunyezwa ngokudlula kwiikhoyili zomphunga, emva koko kujikeleziswe yimoto yombane kwimibhobho eya kumagumbi ahlukeneyo. Iivenkile ezisegumbini zifihliwe kukungqinisi okungabonakaliyo ezindongeni okanye kumsebenzi wobhedu wokuhombisa odlala indima enkulu kwimihlobiso. Undwendwe lunokulawula ubushushu kwigumbi lalo kusetyenziswa ithermostat ezenzekelayo. Ukujikeleza okuqhubekayo komoya kugcinwa kulo lonke isakhiwo, ubusuku nemini: akukho ziyilo, akukho kubanda komoya koyika; Ngokwenyani undwendwe alusoze luvule ifestile yakhe ukuze lubonelelwe ngobuninzi bomoya ococekileyo. Le nkqubo ihamba phambili kakhulu kwiikhoyili zexesha elidala ezinengxolo nezimbi kwaye zingaqinisekanga ngakwicala lobushushu obonelelweyo. Umoya ongcolileyo ukhutshwa ngokufanelekileyo ngabalandeli beemoto. ”
Ukubaluleka kwendlu ebaluleke kakhulu kwaqatshelwa kwaza kwachazwa kwincwadi yehotele iSt. Regis: